ကမ္ဘာကျော် Babymetal အဖွဲ့ရဲ့ရှိုးပွဲတိုင်းမှာ လိုက်လံတီးခတ်ပေးတဲ့ KamiBand ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Fujioka Mikio ဟာ သူချစ်တဲ့ဂီတာကိုချန်ရစ်ထားခဲ့ပြီး သူ့ပရိသတ်တွေကိုကျောခိုင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ ‘Ko-Gami’ (Little God) လို့ချစ်စနှိုးခေါ်ကြတဲ့ Fujioka ဟာ မျက်မှောက်ခေတ်ဂီတလောကထဲက အတော်ဆုံးဂီတာပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်လို့ဆိုရင် ပိုမယ်လို့မထင်မိပါဘူး။ Babymetal အဖွဲ့ကို သာမန် idol အဖွဲ့တစ်ခုအဆင့်ကနေ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက Metal ချစ်သူတွေ လက်ခံအားပေးလာတဲ့အထိ သူ့ရဲ့ဂီတာလက်စွမ်းတွေနဲ့ ပံ့ပိုးပေးခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာဟာ သာမန်စွမ်းဆောင်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုအထင်ကရဂီတပညာရှင်တစ်ဦးကြွေလွင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ဂီတချစ်သူတွေကို ဝမ်းနည်းစိတ်၊ နှမြောတမ်းတစိတ်တွေနဲ့ ပြည့်နှုက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ စင်မြင့်ပေါ်ကပြုတ်ကျတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ကွယ်လွန်သွားရတာဆိုတော့ ပိုလို့တောင်ယူကြုံးမရဖြစ်မိစေပါတယ်။
Babymetal အဖွဲ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာတော့ Fujioka တစ်ယောက် Metal Galaxy တွေထဲမှာ သူအားကျရတဲ့ ဂီတာဆရာကြီး Allan Holdsworth နဲ့အတူ ဂီတာအတူတီးနေမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း ဆုတောင်းပေးထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းနည်းမိကြောင်း အလျှိုလျှိုရင်ဖွင့်နေကြပါတယ်။
R.I.P. Mikio Fujioka Go-Gami.
God of Guitar pic.twitter.com/tNFyfypoRt
— salad heaven (@saladheaven) January 9, 2018
Your guitar riffs can now be heard from the sky likeaspeed of thunder from the heavens. Rest in peace @mikio158cm.. ❤️#GODMIKIO #KAMIBAND #BABYMETAL pic.twitter.com/0o59hjZie6
— Julius Bautista (@C_DeLorean) January 9, 2018
When Japanese people ask me why I came to Japan, I reply “because I like Japanese guitarists.” When they ask me “who?”, my reply is always “Mikio Fujioka.” The world has lostamusical treasure.
— Alfie Bradic (@AlfieBradic) January 9, 2018
I cant believe this. Every family member, every friend and every fan will miss you. Really, thank you for everything you have done. Rest In Peace Mikio. #BABYMETAL pic.twitter.com/6Lsak4JJ5B
— Austin (@AustinBarnette7) January 9, 2018
Rest In Peace, Ko-Gami
PREVIOUS POST Previous post: ‘T-ara’ နာမည်ကို မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်တဲ့ MBK Entertainment
NEXT POST Next post: ‘The Greatest Showman’ ထဲကသီချင်းနဲ့ Billboard Hot 100 စာရင်းထဲ ပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ Hugh Jackman